Saro-tadiavina toy ny vaovao tsara… | NewsMada
Par Taratra sur 01/12/2016
Na ny mpanao gazety koa aza anie mba leo e ! Saingy ireny aloha ny vaovao misy (sy be mpitady), dia ireny no trandrahina. Inona ny malaza amin’izao ? Fitsaram-bahoaka, vono olona, fanafihana, asan-dahalo, haintrano, fanolanana, kidnapping, zaza very, ady tany, fitrandrahana tsy ara-dalàna, delestazy, sns. Raha miova kely, vaovao politika izay. Tsy vaovao tsara koa mazàna, fa vaovao mahamenatra eo amin’ny tontolon’ny politika.
Tsy misy mihitsy izany vaovao tsara? Fanontaniana hapetrak’ireo mpamaky lohatenin’ny gazety eny amoron-dalana eny matetika io. Dia raikitra eo ny adihevitry ny samy mpanara-baovao, na tsy mifankahalala aza. Matetika mirona any amin’ny fanomezana tsiny ny mpanao gazety, izay tsy mitatitra afa-tsy vaovao manaitaitra kanefa ratsy izany.
Ny tsirairay avy ihany anefa dia mahavaly io fanontaniana io. Misy dia misy ny vaovao tsara, ary azo trandrahina tokoa izany. Mipetraka kosa ny fanontaniana setrin’izay: mahaliana ny mpanara-baovao ve izany? Efa maro ny andrana nataon’ny fampitam-baovao isan-tsokajiny, fa toa mandalo fotsiny amin’ny sofina ny vaovao tsara tato ho ato.
Fitaizana sy fanabeazana ve ny nahatonga izany? Mety ho marina, saingy ampahany ihany. Misy dia misy tokoa ny anjara birikin’ny mpampita vaovao, amin’ny fanabeazana sy ny fitaizana ny mpiara monina amin’ny fanjifana ny vaovao misy. Mamolavola ny toe-tsaina izany.
Rehefa hitarina lavidavitra kokoa anefa, raha voasoroka ara-dalàna sy ara-potoana ireny tranga isan-karazany mampihoronkoditra ireny, mihena ho azy ny vaovao ratsy ary mahazo vahana ny lafiny tsara. Doka sy sitraka ny ho azon’ny mpitandro filaminana mahavita tsara ny asany, fa tsy latsa sy eso toa ny heno etsy sy eroa amin’izao fotoana izao. Fisaorana mitafotafo ny ho azon’ny mpitondra fanjakana mandray ny andraikiny, fa tsy kiana mivaivay, manakaiky ny ompa. Mila fomba fijery miabo, iarahan’ny rehetra anefa izany.